“Waxaan halkaan u imid inaan ku guuleysto koobab” – Bruno Fernandes oo farriin u diray Kooxaha ay ku xafiltamayaan Premier League – Gool FM
“Waxaan halkaan u imid inaan ku guuleysto koobab” – Bruno Fernandes oo farriin u diray Kooxaha ay ku xafiltamayaan Premier League
Dajiye November 15, 2020
(Manchester) 15 Nof 2020. Ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa sheegay in Red Devils laga yaabo inaysan heysan wax u suurtagalinaya inay la tartanto qaar ka mid ah kooxaha ay ku xilfamaan horyaalka Premier League.
Laakiin xiddiga reer Portugal iyo kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa sheegay in Red Devils ay wali xaq u leedahay inay si dhaqsi leh ku soo afjarto ka maqnaanshiyaha ku guuleysiga horyaalka Premier League.
Haddaba Bruno Fernandes ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Aniga ahaan kooxaha kale waxba igama quseeyaan, dadka qaar ayaa laga yaabaa inay yiraahdaan qaab shaxdooda aasaasiga ah ayaa naga fiican, iyo xiddigahooda keydka ayaa naga fiican anaga, waxba igama galin waxa ay dhahayaan.”
“Koox sida United oo kale ah, oo aan ku guuleysan Horyaalka Premier League muddo dheer. waa waax aad u fog, aniga ahaan sida ay ila tahay.”
“Sidaas darteed, qof walba… ciyaartooyda iyo dhamaan xubnaha shaqaaluhu waa inay maanka ku hayaan in ujeedka aan halkan u joogno uu yahay inaan guuleysano, waxaan u maleynayaa inaan u qalano inaan ujeedkaas gaarno.”
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Portugal ayaa intaa ku daray, “Waxaan u imid Manchester United inaan ku guuleysto koobab, waana mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn adduunka, waxaana ay gaareen guulo waa weyn intii ay jirtay taariikhdeeda cajiibka ah.”
Musiibada dhaawacyada Liverpool oo halkeeda ka sii socota & Kabtanka Kooxda ee Jordan Henderson oo ku biiray liiska dhaawacyada Reds